/Blog/Gallery/Ahoana no anampian'ny Flibanserin vehivavy iray ho toy ny hormonina firaisana ara-nofo
Posted on 11 / 11 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Ny firaisana ara-nofo dia heverina fa fahita matetika amin'ny lehilahy ary tsara vintana amin'izy ireo; misy safidy fitsaboana isan-karazany hisafidianana azy ireo avy any Viagra, levitra, sy ny zava-mahadomelina ED. Manana fitsaboana hormonina koa izy ireo hanampy amin'ny famerenan'ny firaisana ara-nofo azy ireo. Mahatsiaro ho voailikilika amin'izany ny vehivavy. Soa ihany, manana safidy ihany koa izy ireo. Tsy mila miady intsony amin'ny faniriana ara-nofo intsony izy ireo, olana iray izay niteraka fikorontanana be dia be. Miaraka amin'ny Flibanserin (167933-07-5) dia manana fomba iray izy ireo hanamafisana ny fahalianana ara-nofo.
Inona no Flibanserin
Flibanserin (167933-07-5), izay amidy ambanin'ny anarana Addyi dia fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana ny premenopausal amin'ny vehivavy, indrindra ireo manana aretina faniriana hypoactive. Inona ny aretina faniriana hypoactive manontany anao? Io toe-javatra io izay aseho avy amin'ny faniriana ara-pananahana ambany, izay mety hiteraka fahasarotana interpersonal na sorena. Ity aretina ity dia tsy tokony ho vokatry ny olana ara-pahasalamana miaraka na olana momba ny fifandraisana. Ankoatr'izay, tsy olana ateraky ny fanafody na ny fampiasana zava-mahadomelina.
Tsara homarihina izany Flibanserin tsy natao ho an'ny vehivavy efa tonga menopause. Ary tsy mety amin'ny lehilahy. Ity fanafody ity dia atolotra eo ambanin'ny programa manokana, izay midika fa tsy maintsy hosoratana ao amin'ity programa ity ny iray alohan'ny hahazoana ny fanafody. Ity programa ity dia manampy ny mpampiasa hianatra ny tombontsoa sy ny risika ateraky ny fampiasana an'io fanafody io, ary amin'ny fomba ity, dia afaka mandray fanapahan-kevitra tsara izy ireo raha mety ho azy ireo na tsia. Tokony ho marihina koa ny mpampiasa fa ity fanafody ity dia tsy tokony ampiasaina amin'ny fampivoarana ny fanaovana firaisana ara-nofo. Fa kosa natao hanampiana ireo manana faniriana ara-nofo mihena nefa tsy misy antony tokony hatao.
Ahoana ny fiasan'i Flibanserin amin'ny vehivavy?
Vehivavy marobe no tsy misalasala momba ny fampiasana an'io vokatra io ary tsy haiko raha tokony hampiasa azy ireo na tsia. Ny antony, matahotra ry zareo sao dia tsy ho mandeha izy io. Ny marina dia, na tsy miasa aza ity vokatra ity dia tsy fiasa ho an'ny olon-drehetra. Samy hafa ny fihetsiky ny olona rehetra ary noho ny fiasan'ny olon-kafa dia tsy midika izany fa ho lasa mitovy aminao ihany. Na izany aza, 60% amin'ireo izay nampiasa an'io fanafody io dia nanome valiny tsara ary nilaza fa nanolotra valiny tena tsara ny fanafody.
Ny fanontaniana lehibe anefa dia izao; ahoana no fomba fiasa? Tsy mbola nisy ny fanadihadiana mazava momba ilay mekanika nampiasain'ity fanafody ity mba hahazoana vokatra. Na izany aza, ny mpikaroka dia nanisy teôlôjia, taorian'ny fanoloran-tena fa ny serotonin dia tompon'andraikitra amin'ny fanakanana ny firaisana ara-nofo ary hitan'izy ireo fa Flibanserin167933-07-5) mampihena ny hetsika serotonin ao amin'ny ati-doha. Izany, ho setriny, dia mamerina amin'ny laoniny ny filan'ny vehivavy. Ary koa, ny fanafody dia misy fiantraikany amin'ny fomba ankolaka amin'ny norepinephrine sy dopamine, izay mifamatotra amin'ny faniriana ara-nofo mihatsara koa.
Tsy toy ny Viagra sy ny fanafody mifandraika amin'ny lahy sy ny vavy, ity fanafody ity dia miasa amin'ny alàlan'ny fikendrena ny atidoha. Manao izany amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny haavon'ny neurotransmitters izay ampiasain'ny atidohanao mba hamporisika ny fahalianana ara-nofo.
Amin'ny ankapobeny, ny zava-mahadomelina dia manilika ireo bokotra roa lehibe amin'ny saina izay tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny filan'ny firaisana ara-nofo raha manakana ny neurotransmitters izay tompon'andraikitra amin'ny fanesorana ny firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy. Io fanafody io dia nampidirina tany an-tsena niverina tany 2015 taorian'ny fankatoavan'ny FDA azy amin'ny fitsaboana ho azo HSDD amin'ny vehivavy.
Na dia tsy misy aza ny fampahafantarana mazava momba ny karazam-behivavy afaka mandray an'ity fanafody ity, azo antoka kosa fa ny fanafody dia ampiasaina hikarakarana ny filan'ny nofo voajanahary very. Midika izany fa tsy miasa afa-tsy raha tsy misy ny fototra azo antoka ho an'ny filan'ny firaisana very, toy ny fahaverezan'ny fahalianana amin'ny fifandraisana na noho ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina hafa. Ary koa, tsy ho an'ireo miady amin'ny menopause. Ny fanafody dia nisedra ny vehivavy voan'ny HSDD. Samy nanana fifandraisana maharitra avokoa ireo vehivavy, midika izany fa ny olany dia tsy vokatry ny fifandraisana tsy sambatra. Nanana faniriana ara-nofo izy ireo taloha ary matahotra sao dia ho resy tsikelikely izy ireo ary mitady fomba hahazoany izany.
Ireo vehivavy ireo dia niaina io olana io nandritra ny dimy taona, ary nilaza izy ireo fa tsy manana filàna ara-nofo ho an'ny mpiara-miasa aminy na olon-kafa. Manodidina ny 50-60% amin'ireo vehivavy dia nandray tsara ny fanafody, fa ny hafa kosa nanao fihetsika ratsy. Ny sasany dia naniry hanao firaisana ara-nofo ho an'ny olon-kafa fa tsy mpiara-miasa aminy, ary noho izany dia tsy misy fanazavana mazava momba ny fomba hamalian'ny vatanao ny fanafody.
Ny fanontaniana iray matetika apetraka amin'ny fomba fiasan'ny zava-mahadomelina dia haharitra hafiriana hahitana valiny. Indray, io lafiny io dia mety tsy hitovy amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa, indrindra noho ny fihetsik'izy ireo amin'ny fomba hafa. Na izany aza, ny fitsapana dia manoro hevitra fa maharitra hatramin'ny efatra herinandro hahitana ny valiny voalohany ary hatramin'ny roa ambinifolo herinandro ho an'ny valiny farany. Ianao kosa anefa mila mampiasa azy tsara mba hahitana ny valiny.
Ny fatra natolotry ny manam-pahaizana dia 100mg, izay tokony alaina am-bava, indray mandeha isan'andro. Tsara indrindra raha ampiasaina mandritra ny fotoana fatoriana na fialan-tsasatra. Izany dia satria ny fahazoana an'ity fanafody ity mandritra ny ora fiasana na rehefa mazoto ny vatanao dia mampidi-doza ny fivoaran'ny syncope, ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny rafi-pitatitra, hypotension, na mety hitranga ianao.
Inona no mitranga raha tsy mahita dosage ianao?
Raha diso ianao Flibanserin fatra mandritra ny torimaso, fahazoana miandry mandra-pahatongan'ny torimaso manaraka hanondrana ny zava-mahadomelina.
Ny fihoaran'ny fanafody dia tsy midika hoe hahazo vokatra haingana ianao. Raha tsy izany dia hitondra fiantraikany ratsy anao fotsiny izany. Torohevitra fa raha overdose tsy nahy ianao na mieritreritra ny nanaovanao izany, dia mitadiava fitsaboana haingana.
Rahoviana ianao no mampiato ny fampiasana azy?
Tokony hatsahinao ny fampiasana an'io zava-mahadomelina io rehefa afaka mampiasa valo andro tsy misy fanatsarana. Araky ny efa voalaza teo aloha dia miasa amin'ny olona hafa samihafa ny fanafody. Mety hanomboka hahita vokatra avy hatrany ny sasany, fa ny sasany kosa dia mety haka fotoana. Na izany aza, tsy tokony hitondra anao mandritra ny valo herinandro mahery mba hisedrana na dia fanatsarana kely aza. Raha mitranga izany, dia mampiseho fa tsy mety ho anao ilay vokatra, ary tsara indrindra raha ajanonao ny fampiasana azy.
Fanovana ny fatra
Miankina amin'ny toe-javatra, azonao atao ny manova ny fatrao amin'ny mavesatra na mahery mifototra amin'ny CYP3A4 inhibitors. Tsiahivina fa raha mampiditra ny Flibanserin miorina amin'ny antonony na mahery vaika ianao CYP3A4 inhibitor, ary avy eo ianao dia tokony hanomboka rehefa afaka roa herinandro manomboka eo amin'ny fatra farany an'ny inhibitor CYP3A4. Raha te hanova ny CYP3A4 inhibitor ianao araka ny ampiasan'ny FLIBANSERI dia tokony hataonao roa andro aorian'ny fatrany Flibanserin teo aloha.
Tsara homarihina fa io zava-mahadomelina io dia mety ho an'ireo manana HSSD, midika izany fa ny olana dia nanjo ireo olona tsy nanana aretina mihintsy. Tsy tokony ho toy ny vokatra hafa na noho ny menopause koa ny olana. Raha manana HSDD ianao na inona na inona toe-javatra misy, mpiara-miasa na famporisihana, dia ho anao ity vokatra ity. Raha manana faniriana firaisana ianao angamba satria sorena, dia sahirana amin'ny asa ianao, na tsy mifamatotra intsony amin'ny mpiara-miasa aminao, dia io fanafody io tsy izay ilainao mba hamahana ny olanao. Tsy natao hanamafisana ny fanaovana firaisana ara-nofo velively anefa izany, fa natao handrisihana ireo hormonina firaisana ara-nofo. Ary tsy tokony hampiasa ny lehilahy io.
Inona avy no vokatry ny fampiasana Flibanserin?
Izay manana tombony dia misy fiantraikany ratsy koa. Ny lehibe Ny tombony amin'ny Flibanserin dia manome fampivoarana miharihary eo amin'ny firaisana ara-nofo. Izy io dia miasa tsara amin'ny fitsaboana HSDD miaraka amin'ny fikarohana siantifika sy ny fitsapana anecdotal izay mampiseho fa mitombo ny faniriana ara-nofo sy ny fahalianana. Na izany aza dia tsy mahomby foana ny fanafody, ary tokony hampiasa azy amin'ny saina misokatra ianao. Ny zava-mahadomelina dia tsy natao hametrahana ny faniriana ara-pananahana very noho ny fanafody efa misy na ny fe-potoana fahasalamana na fikorontanana ara-batana. Tsy azo ampiasaina koa raha toa ka mampiasa medaly hafa ianao izay mety hisy fiantraikany amin'ny fanirianao hanao firaisana, toy ny antidepressant. Mila avelanao ny dokoteranao manombatombana anao aloha mba hamaritana raha mety aminao ny mampiasa ilay fanafody ary raha toa ka miasa ho anao izy.
Tsy tokony hampiasa an'ity fanafody ity ianao raha manana olana ara-pahasalamana toy ny aretin'ny fo, tosidra, na diabeta. Tokony havelanao hanampy anao ny dokotera anao hitantana ireo olana alohan'ny hampiasana ny fanafody.
Alohan'ny fankatoavana ampiasaina, ny fanafody dia tsy maintsy andramana ny FDA mba hamaritana raha azo antoka ny fampiasana azy. Na izany aza, ny ADDYI amin'ireo zava-mahadomelina ireo izay tsy mbola tapa-kevitra feno raha azo antoka ny fampiasana azy. Ny fanafody dia voaporofo fa tena ilaina amin'ny fampitomboana ny Libido ary ny fanampiana ireo vehivavy manana faniriana ara-pananahana ireo. Hita fa manana tombontsoa maro izy io ary amin'ny maha-fifandraisana lehibe. Na izany aza, ny FDA dia nahita fa ny fanafody dia misy fiantraikany amin'ny lafiny sasany, avy amin'ny fahatsentsenana, ny torimaso ary ny fisalasalana. Ireo no mahazatra Vokatry ny Flibanserin, fa ny FDA dia niahiahy momba ny voka-dratsy roa lehibe tokony hohanin'ny olona momba izany;
Raha diso tafahoatra ny fanararaotana dia misy voka-dratsina ity zava-mahadomelina ity, ary misy ny mampiasa azy noho ny antony tsy mety rehefa manandrana milamina tsara izy ireo. Raha mitranga izany, ny mpampiasa dia matory mandritra ny ora maromaro mihoatra ny tokony ho izy. Izany, ho setriny, dia misy fiantraikany amin'ny vokatra azony noho ny tsy fahampian'ny fifantohana sy matory mandritra ny ora diso.
Maty noho ny fihenan'ny tosidra
Ity no lafiny mampidi-doza indrindra, ary matetika izy rehefa ampiasaina amin'ny fotoana tsy mety ny zava-mahadomelina. Araka ny efa voalaza teo aloha, ny fanafody dia tokony ampiasaina mandritra ny torimaso na fialan-tsasatra. Ny fitantanana ny zava-mahadomelina mandritra ny ora mamoha na rehefa mihetsika ny vatanao dia miteraka fihenan-dra ary mety hahatonga anao ho ketraka.
INDRINDRA INDRINDRA AN'I Flibanserin?
Contraindicated amin'ny alikaola
Rehefa voatondraka ny alikaola dia mety hiteraka fihenan-dra lehibe, ity fanafody ity, izay hiteraka fivalanana, harerahana ary fanodinkodinana, ary mety ho ketraka mihitsy ianao noho ireo vokadratsina. Torohevitra fa rehefa manomboka mampiasa Flibanserin ianao dia tokony hajanona tsy hisotro toaka. Na ny alikaola kely indrindra aza dia mety hitarika ireo voka-bika voalaza.
Mifanohitra amin'ny INhibitors CYP3A4 marefo na mahery
Raha ampiasaina amin'ny fitaovana mampihena mahery vaika na miadana YP3A4, dia azo inoana fa hahatsapa fampifangaroana Flibanserin mitovitovy kokoa ianao, izay hitovizan'ny overdosing kokoa. Izany dia ho setrinao, hahatsapa ny vokatry ny fihoaram-bidy an'io zavatra io. Miaraka amin'izany, tokony ho marihinao fa ny fampiasana ny inhibitor dia mifanohitra, midika izany fa tokony hampiasaina ihany ianao raha toa ka manery azy.
Contraindicated amin'ny marary manana tsiranokat
Tsy tokony atao amin'ny fitsaboana ny atiny ny zava-mahadomelina raha tsy noho ny fanampian'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana. Tsiahivina fa mitady toro-hevitra avy amin'ny dokotera hanampy anao amin'ny fitantanana ny aretin'ny atiny alohan'ny hanokafana ny fampiasana an'io zava-mahadomelina io. Ny fandalinana dia nampiseho fa Flibanserin (167933-07-5) dia nitombo ny fiparitahan'ireo manana fahasimbana amin'ny atiny raha ampitahaina amin'ireo manana fo miasa salama, izay mampibaribary azy ireo fa mety hampidi-doza kokoa ny fivoaran'ny syncope, hypotension, ary ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny fo.
Bevohoka sy lactation
Tsy misy fanadihadiana mazava manondro na mety hampidi-doza amin'ny vehivavy bevohoka na mampinono ve ity vokatra ity. Araka ny fitsapana natao tamin'ny biby dia nanaporofo fa tsy misy afa-tsy ny fihinanana poizina ihany no misy otrikaretina. Ny sasany amin'ireo fiantraikany mandritra ny vanim-potoana toy izany dia mahazo lanja, torimaso ary fahatsapana. Matory mihoatra noho ny mahazatra ny biby. Ny sasany tamin'ireo biby dia nahatsapa fiantraikany fitomboana sy fampivoarana, ao anatin'izany ny mety ho fisitsiana ara-drafitra sy ny fihenan-danja.
Mbola tsy voafaritra izany raha ny vovony Flibanserin (167933-07-5) dia misy fiantraikany amin'ny fizarana rononon-dreny ao amin'ny zanak'olombelona, ​​ary tsy fantatra koa na misy fiantraikany amin'ny zaza mpampinono. Ny fandinihana natao tamin'ny voalavo dia nampiseho fa ny fanafody dia nesorina tamin'ny ronono rat. Amin'izany, azo antoka fa ny fampiasana ny Flibanserin rehefa bevohoka na mampinono dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny vehivavy mampinono toy ny sedation, ary izany koa dia mety hisy fiantraikany amin'ny zaza mpampinono.
Flibanserin mety ho lanja
Araka ny fanadihadiana maro sy ny fanadihadiana hoc hoc, vehivavy postmenopausal sy premenopausal izay nampiasa io fanafody io ho an'ny hypoactive firaisana ara-nofo mety hanjary lanja ny faniriana faniriana. Aleo atrehintsika. Vehivavy maro no mahatsiaro ny lanjany ary matahotra ny hampiasa zavatra tsy hanimba ny lanjany. Fihetseham-po mampahery tokoa ny mahafantatra fa ny fampiasana ny FLIBASERIN dia tsy misy fihenan-danja amin'ny olona, ​​fa kosa manampy azy ireo handatsaka lanja lehibe tokoa. Raha toa ianao ka miady amin'ny olana mavesatra ary mitady fomba tsy hitondrana azy dia fampiana izany.
Ny fikarohana momba izany dia natao mba hanomezana toky ny vehivavy, saingy azo antoka izy ireo satria ny ankamaroany dia tsy te handray ny fanafody. Ny ankamaroan'ny antidepresse dia fantatra fa miteraka lanja, ary matahotra ny vehivavy fa hisy fiantraikany mitovitovy amin'izany fitsaboana izany.
Ny olana dia vokatry ny fisian'ity zava-mahadomelina ity dia olona 5-HT2C receptor 5-HT2C agoniste dia mifandraika amin'ny fatiantoka mavesatra, satria neken'ny FDA momba izany ary ny Flibanserin dia zaza tsy ampy taona dia nanome ny fomba fiheveran'ny vehivavy fa hiteraka izany. mahazo tombony izy ireo.
Fividianana ny Flibanserin
Ny hany fomba ahafahana mankafy ny vokatra tsara indrindra dia raha toa ianao mividy Flibanserin amin'ny mpivarotra azo itokisana. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana an'ity vokatra ity dia misy ny fiakaran'ny mpamatsy milaza fa manolotra ny kalitao tsara indrindra ao amin'ny Flibanserin. Na dia manana ny fahaliananao indrindra ny sasany aza, dia ny sasany ihany no maneso an'ireo mpividy efa kivy. Te-hahazo antoka ianao fa hahazo ny vokatra avy amin'ny mpamatsy iray azonao atokisana tanteraka. Afaka mahazo ianao mihitsy aza Flibanserin poopy izay ahazoanao vahaolana alohan'ny hitantanana azy am-bava. Makà fotoana, mitadiava fikarohana tsara hahitanao ny tsara Flibanserin amidy. Ny zava-mahadomelina dia vokatra saro-pady, ary ny mahatonga ny tsy mety dia mety hanaratsy ny toe-pahasalamanao noho ny teo aloha.
Noporofoin'i Flibanserin fa vahaolana tsara indrindra ho an'ny vehivavy izay manana firaisana ara-nofo tsy misy antony fototra. Na izany aza, tsy maintsy mahazo ny kalitao tsara indrindra amin'ity vokatra ity ianao ary ampiasao amin'ny fomba mety hahitanao ny valiny. Tokony hampiasa azy io amin'ny saina misokatra ihany koa ary mariho fa mety tsy miasa ho anao izy io ary miasa ho an'ny olon-kafa. Aza hadino ny maka ny torohevitry ny dokotera alohan'ny hanombohan'ny fampiasana azy hamaritana raha mety ianao no ho kandida.
Jane McCall, Vehivavy Viagra Flibanserin: Ny torolàlana feno momba ny fitsaboana ny tsy fanarahan-dalàna momba ny firaisana ara-nofo amin'ny Hypoactive (HSDD) ary ny fampitomboana ny Libido vavy ho tonga miramirifiry ary manala ny fahatsapana alahelo; 1724181459
Amazon Digital Services LLC - Kdp Manaova Izahay, 2018, Pink Viagra (Flibanserin): Torolàlana ho an'ny Fampivoarana Vehivavy Mampitombo ny firaisana ara-nofo ary manampy ny vehivavy hahatratra orgasm maro, 1729471161
Borsini F, Evans K, Jason K, Rohde F, Alexander B, Pollentier S (2002). "Pharmacology of flibanserin". Review momba ny zava-mahadomelina CNS. 8 (2): 117-42.
Ny zavatra rehetra momba ny Oxandrolone (Anavar), mila fantatrao	Ahoana ny fiasan'ny Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) ho an'ny mpamorona vatana